ओलीको स्पष्टीकरण : सभामुखलाई माइकले हान्ने योजना थिएन | Ratopati
ओलीको स्पष्टीकरण : सभामुखलाई माइकले हान्ने योजना थिएन
‘गरिबलाई १०/१० हजारका दलले राहत दिने व्यवस्थाले सरकारको हित गर्दैन’
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवम् संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीले सभामुखलाई माइकले हान्ने पार्टीको कुनै पनि योजना नरहेको स्पष्टीकरण दिएका छन् । आइतबार पार्टीको संसदीय दलको बैठकमा संसदीय मर्यादा विपरितका गतिविधि बन्द गर्न पार्टीका सांसदहरुलाई निर्देशन दिँदै सो कुरा बताएका हुन् ।
ओलीले भने, ‘मैले कतिपय साथीहरुले बोलेको भन्ने रिपोर्ट पनि सुनेँ– हाम्रो चाँही सभामुखलाई माइक हान्ने षडयन्त्र थियो, योजना थियो भनेर । त्यस्तो थिएन । त्यस्तो नभएको कुरा हामीले मिडियामा बोल्न हुँदैन । मिडियामा हुँदै नभएको कुरा बोल्नु वाञ्छनीय हुँदैन । हाम्रो त्यस्तो योजना छँदै थिएन । त्यसकारण हाम्रा माननीयजीहरुले बोल्दा, व्यवहार गर्दा जिम्मेवारीपूर्वक बोल्ने, व्यवहार गर्नुपर्ने हुन्छ ।’
‘एक जनाको व्यवहारले अथवा काँध चढेर माथि जाने, खेल्ने कुराहरु नगर्नू । किनभने, त्यो एउटा देखाउने कुरा मात्रै हुन्छ । के हामीले साँच्चै मर्यादापालकहरुको घेरा तोडन खोजेको भए बेग्लै ढंगले प्रस्तुत हुन्थेउ होला नि । मर्यादापालकहरुको घेरा हामीले तोडन खोजको होइन,’ उनले भने, ‘मर्यादापालकहरुले घेरा लगाउँछन् । हामी आफ्नो ठाउँमा नारा लगाउँछौँ । तर नारा लगाउनका लागि बेलमा स्पेस दिने गरी मर्यादापालकहरु रहनुपर्ने हुन्छ । हामी त्यो कुरा सत्तापक्ष र सभामुखलाई सचेत गराउन चाहन्छौँ । हामी संसदलाई अस्तब्यस्त बनाउने गरी विरोध प्रदर्शन गर्ने पक्षमा छैनौँ ।’
अध्यक्ष ओलीले संसदीय मर्यादा र सीमाको ख्याल गर्न पनि पार्टीका सांसदहरुलाई सचेत गराए । उनले सरकारले ल्याएको बजेटसम्बन्धी प्रतिस्थापन विधेयकले दलहरुभित्रै फुट ल्याउने दावी समेत गरे । पाँच लाख गरिबलाई १०/१० हजारका दरले राहत दिने व्यवस्थासहित सरकारले ल्याएको बजेटले सत्तारुढ दलहरूको आफ्नै हित नगर्ने अध्यक्ष ओलीको तर्क थियो । सो प्रतिस्थापन विधेयकमा घण्टाघर भत्काउने कुरा उल्लेख गरिएको प्रसङ्ग कोट्याउँदै अध्यक्ष ओलीले वर्तमान सरकारले घण्टाघर बनाउन नसक्ने पनि बताए ।
उनले भने, ‘यो बजेट जनतालाई राहत, सहुलियत दिने कुरामा उदासिन छ । र यो कार्यान्वयन गर्न खोज्यो भने भ्रष्टाचारबाहेक केही पनि पाउँदैन । ५ लाख मान्छेलाई १०/१० हजारका दरले वितरण गर्ने, के आधारमा ? कुन मापदण्ड, कसलाई ? यसले सत्ताधारी गठबन्धनभित्र पनि समस्या पैदा गराउँछ । यदि यो गठबन्धन जसरी पनि टिकाउने हो भने बेग्लै कुरा हो, नत्रभने यो विल्कुलै ठिक छैन । यसको मनसाय ठिक छैन । यसको कार्यान्वयन पनि हुन सक्दैन । कार्यान्वयन गर्न खोजियो भने स्वेच्छाचारिता हुनेछ । र एउटा पार्टीको कार्यकर्तालाई सायद दशैँका लागि पकेट खर्च वितरण गर्ने कुरा होला । सरकारले यो कुन गरिबलाई वितरण गर्छ ? वितरण गर्ने खालको टवाक्क संख्या सरकारले कहिले सुन्या हो ? अथवा यो सबै अन्धाधुन्ध, लहडबाजीमा आएको कुरा हो ।’
उनले मानव संशाधन विकासको सन्दर्भमा छुट्टयाइएको बजेट र कार्यक्रम पनि सरकारले रद्ध गरेको बताए । उनले भने– ‘बजेटलाई कटौती गर्या छ । गाउँगाउँमा बाटो पुग्थे । सदरमुकामसम्म बाटो पुग्थ्यो । रणनीतिक सडकहरू पुग्थे । ती आयोजना नै काटिदियो । राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम काटियो । अब अरु कुरा छाडेर बनाउनचाँही के गर्छ कुन्नि । घण्टाघर भत्काउने कुराचाहीं घोषणा भएको देखिन्छ । म माननीयजीहरुलाई भन्न चाहन्छु–तपाईहरु नोट गरि राख्नुहोस्, भत्काउनचाहिँ यसले सक्ने भो । तर बनाउनचाहिँ यसको बुताले सक्ने कुरा होइन, सक्दैन ।’ अध्यक्ष ओलीले सभामुखका कारण सरकारले ल्याएको प्रतिस्थापन विधेयक पनि सहज ढंगले अघि बढाउन सक्ने अवस्था नभएको स्पष्ट पारे ।